YIPHUMELELE! IKHADI LESIPHO ELINGU-100 LEPHONDO LEKOFU CO KUNYE NEPAKETHE YAMABHASO - IINDABA
Yiphumelele! Ikhadi lesipho elingu-100 lephondo leKofu Co kunye nePakethe yamaBhaso
I-Horn Coffee Co yibhetshi encinci, eqhutywa yintsapho ejolise kuzinzo, ekubumbeni iimbotyi ze-espresso ezinemvelaphi enye, zisebenzisa izimvo eziyinyani zorhwebo, kunye nokukhuthaza ubumelwane. Bazigcoba ngokupheleleyo iimbotyi zabo kwangolo suku ubalungiselela ngalo kuguquko, konke-umbane weTesla yeeRoasters kwaye uzithumele kumzi-mveliso okhokelela ekuvuseleleni kwakhona, ekupakisheni okungathathi cala kwekhabhoni.
Ukongeza, banokuguqula inxenye yokuthenga kwakho kwisisa sendlela yakho okanye kwiiphakheji ezixhasa amantombazana kwishishini okanye kulutsha olungenamakhaya kwindawo yabo yeReno / iLake Tahoe. I-Horn Coffee Co ibonelela ngemirhumo, ukugoba iinkampani okanye iikhefi, kwaye iya kukugaya i-espresso yakho ngaphandle kokuchitha idime. Funda ngaphezulu kwi www.horncoffee.com.
Ukongezwa kunika ipakethi yebhaso kubahlobo abahlanu abanethamsanqa. Ngena ngaphantsi kwithuba lakho lokuphumelela!
Ibhaso ngalinye liquka:
Ikhadi lomvuzo oyi- $ 100 lokuthenga ihorncoffee.com
2 shatterproof, ingqolowa yeespresso imagi
1 matte isitya esimnyama sokugcina kwi-Horn Coffee Co espresso yakho
Isipho siphela ngo-Agasti 22, 2020 ngo-11: 59 PM PST.
Imvelaphi Yiphumelele! Ikhadi lesipho elingu-100 lephondo leKofu Co kunye nePakethe yamaBhaso
Izigaba: Tech-Iindaba Iwiki Hulu
I-trixie garcia net efanelekileyo
Iibhasikiti isizini 3 hulu
italente nana episode 1 isingesi sub
anne nge e wiki
mike imeko yeetatoo